Mayelana Nathi - Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.
I-Sichuan Rongteng Automation Equipment Co., Ltd.
Sinethimba lobuchwepheshe eligibele i-skid lemishini yegesi yemvelo e-China. I-Natural Gas Engineering Research Institute yethu inezisebenzi ze-R&D ezingaphezu kwama-40. Kusukela ngoJuni 2020, sithole amalungelo obunikazi angama-41, okuhlanganisa namalungelo obunikazi ayisi-6.
Sinamandla aqinile okukhiqiza ama-skid kanye nezindawo zokuhlola eziphelele, indawo yokusebenzela engu-200,000 m² yokukhiqiza imishini yokushushuluza nemikhumbi. Ngaphezu kwalokho, sinegumbi elikhulu le-sandblasting elikhethekile, igumbi lokupenda, isithando somlilo sokushisa; 13 okhreni abakhulu nabaphakathi nendawo, abanamandla okuphakamisa amathani angama-75.
Ngokusekelwe ekamelweni elikhethekile lokubona iphutha le-welding, singakwazi ukwenza i-UT (i-ultrasonic), i-RT (i-Ray), i-PT (ukungena) kanye ne-MT (i-magnetic powder) ukutholwa kwamaphutha; kanye nezindawo zokuhlola ingcindezi yesilingo ezichwepheshile zamapulatifomu okuhlola okuzenzakalelayo e-FAT eselula enziwe ngokwawo, singakhipha imibiko yokuhlola ngokunembe nangokushesha.
• Imishini yokwelapha uwoyela ongahluziwe
• Imishini yokwelapha ikhanda
• Impahla yokupholisa igesi yemvelo
• Iyunithi yokutholwa kwe-hydrocarbon elula
• I-LNG Plant
• I-compressor yegesi
• Ijeneretha yegesi yemvelo
Sithole ilayisensi kazwelonke yokwakhiwa komkhumbi we-A2 kanye nelayisense yokukhiqiza, ukufakwa kwemishini ekhethekile ye-GB1, i-GC1 yebanga le-GC1, ilayisense yokuguqulwa nokulungisa, kanye nelayisensi yase-US ASME, isitembu se-U&U2. Ingenza ibhizinisi lokuklama nokwenza ibhizinisi lemikhumbi ehlukahlukene yokucindezela, amapayipi okucindezela kanye nezingxenye zokucindezela.
Sisungule uhlelo oluqinile lwekhwalithi, indawo ezungezile kanye nokulawulwa kwezempilo nokuphepha emsebenzini futhi sithole isitifiketi se-ISO9001:2015 sohlelo lokuphatha ikhwalithi, isitifiketi se-ISO14001:2015 sohlelo lokuphathwa kwemvelo, isitifiketi se-GB/T28001-2011 sohlelo lokuphatha impilo nokuphepha. Ngaphezu kwalokho, sithole isitifiketi esithi "I-China Honored Brand for Excellent Quality and Assured Service" isitifiketi esinikezwe i-China Association for Quality Inspection, futhi imikhiqizo yethu iklonyeliswe ngesihloko esithi "Sichuan Famous Brand" izikhathi eziyisithupha zilandelana.
Ngesisekelo sokuhlanganisa imakethe yasekhaya, imikhiqizo yethu kanye nezinsizakalo zithunyelwa emazweni angaphezu kweshumi nezifunda zase-Asia, eYurophu nase-Afrika, kuhlinzeka amakhasimende ngezinsizakalo ezisezingeni eliphezulu, ezisebenzayo nezigculisayo.
Sizibophezele ekubeni umholi wemboni yemishini yamandla ahlanzekile eChina!
Ukucacisa, ukuzinikela, i-pragmatism kanye nokuqanjwa okusha
Ubulula nokuzwana, ukwethembeka nobuqotho, ukwethembeka nothando, ukunqoba phakade.
Ukuba ngumkhiqizi ohamba phambili embonini kawoyela negesi eChina.
Isevisi yangaphambi kokudayiswa
Sihlinzeka ngesixazululo sokuncintisana ngemva kokuqonda izidingo ezinemininingwane yekhasimende.
Sinikeza izesekeli kanye nemanuwali yokusebenza, futhi siqondisa amakhasimende ukuthi afake futhi athumele esizeni. Uma kukhona izinkinga ohlelweni lokusebenzisa, sizonikeza isiqondiso sevidiyo futhi sibhekane nazo lapho kudingeka.